Jeff Goldblum ga-enwe mmasị ịme ihe nkiri 'ofufe' ọzọ - iHorror
Home Akụkọ Ntụrụndụ ụjọ Jeff Goldblum ga-enwe mmasị ịme ihe nkiri 'ofufe' ọzọ
Jeff Goldblum ga-enwe mmasị ịme ihe nkiri 'ofufe' ọzọ
by Michael anamusọ eto June 17, 2018
by Michael anamusọ eto June 17, 2018 1,835 echiche
Onye ọ bụla na-ahụ Jeff Goldblum n'anya, ma gịnị kpatara ya, ọ bụ akụkọ ifo. N'ịbụ ndị a hụrụ n'anya maka ime ihe ike ya na nke ọma ya, Goldblum na-etu ọnụ maka otu ọrụ, gụnyere fim dị iche iche Ogige Jurassic, Ụbọchị mwereonwe, na Thor: Ragnarok.
Nye ndị egwu na-atụ ụjọ, ọ ga-abụ na a ga-echetara Goldblum nke ọma maka idu ndú ya na David Cronenberg dị ịtụnanya nke 1986 Ijiji. Igosipụta ụfọdụ mmetụta pụrụ iche dị egwu n'akụkọ ihe mere eme, The Fly gosiputa na nmeghari nwere ike ichi oge ufodu.
N'ime ihe nkiri ahụ, Goldblum na-eme sayensị bụ Seth Brundle, bụ onye mepụtara otu usoro nke teleportation pods nke na-ele anya bụrụ ihe mmụta sayensị. O di nwute, o mechara jikọta DNA ya na ugba ojoo, na-eduga ụjọ nye onye ọ bụla metụtara.
mgbe ofufe Mmetụta ihe okike Chris Walas ga - eduzi ezigbo ihe na 1989 Ofufe II, Goldblum mere ka amara ya n’oge a na mkparịta ụka Na-asọ oyi na ọ ga-adị njikere karịa ịpụta na ọhụrụ ofufe nkeji nkeji.
Ọ bụ ezie na Seth Brundle nwere ike ọ gaghị anwụ Ofufe, Goldblum na-ekwu na ọ ga-enwe obi ụtọ igwu onye ikwu Brundle a na-akpọghị aha. Tụle otú Goldblum si dị ukwuu Ofufe, O doro anya na Fans ga-ajụ ajụjụ ọ bụla iji mee ka ọ laghachi na aha ya.
Otú ọ dị, e nwere azụ azụ. Isi ihe kpatara Jeff Goldblum chọrọ ịlaghachi bụ ohere iji soro Cronenberg rụ ọrụ ọzọ, ọ gafeela ọtụtụ afọ kemgbe Cronenberg mere ihe nkiri egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ bụ echiche na-atọ ụtọ ịtụgharị uche, anyị niile nwere ike ịchọrọ ka ọ mee.